Umatshini wokungunda we China weFlour, Umgubo wezixhobo zokugaya ukutya
Womoya mqengqeleki Mill
Umatshini wokugaya womoya ngumatshini wokugaya ingqolowa ofanelekileyo wokulungisa ingqolowa, ingqolowa, ingqolowa yerurum, irye, irhasi, ibuckwheat, amazimba kunye nemithombo.
Isiguquli sombane ngumbane ofanelekileyo wokugaya ukutya okuziinkozo ukulungiselela ingqolowa, ingqolowa, ingqolowa yedurum, irye, irhasi, ibuckwheat, amazimba kunye nemithombo.
Flour Milling Equipment Inambuzane Umonakalisi
Izixhobo zokugaya izinambuzane ezitshabalalisayo zisetyenziswa ngokubanzi kwizingqusho zomgubo wale mihla zokunyusa ukucolwa komgubo kunye noncedo lokusila.
Umphumo wentsingiselo wenziwe ngokokuyilwa kwethu kwangaphambili. Umatshini wokuqhubela phambili kunye nobuchule buqinisekisile ukuchaneka okunqwenelekayo kunye nomgangatho wemveliso.
Ukucoca umgubo omncinci wokucoca.
Uyilo lwegumbi elivulekileyo nelivaliweyo ziyafumaneka, ukusefa kunye nokuhlela izinto ngokobungakanani bamasuntswana, Ukusetyenziswa ngokubanzi kumgubo wokugaya, ukusila irayisi, ukutya ukutya, Kusetyenziswa nakwimizi-mveliso yeMichiza, yezoNyango kunye nezinye.
I-Mono-Icandelo le-Plansifter inesakhiwo esidibeneyo, ubunzima bokukhanya, kunye nofakelo olulula kunye nenkqubo yokusebenza yovavanyo. Inokwaziswa ngokubanzi kwimixube yangoku yomgubo wengqolowa, umbona, ukutya, kunye neekhemikhali.
Iplani yamacandelo amawele luhlobo lwesixhobo sokugaya umgubo. Isetyenziselwa ukucoca kokugqibela phakathi kokuhluzwa ngeplififter kunye nokupakishwa komgubo wokugaya umgubo, kunye nokuhlelwa kwezinto ezigungxulwayo, umgubo wengqolowa omdaka, kunye nezinto eziphakathi.
Umgubo wokucoca umgubo usetyenziswa ngokubanzi kwimingxunya yomgubo wangoku ukuvelisa umgubo ngomgangatho ophezulu. Isetyenziswe ngempumelelo ukuvelisa umgubo we-semolina kwindawo yokugaya umgubo we-durum.
Isixhobo sokugaya isando
Njengomatshini wokugaya ukutya okuziinkozo, i-SFSP yethu yesinyithi sokugaya isamente inokutshitshisa iintlobo ezahlukeneyo zezinto ezinamatye anjengembona, amazimba, ingqolowa, iimbotyi, ikhekhe leembotyi zesoya ezityaliweyo, njalo njalo. Kufanelekile ukuba amashishini afana nokuveliswa kokutya kunye nemveliso yemveliso.
I-bran finisher ingasetyenziswa njengenyathelo lokugqibela lokunyanga i-bran eyahlulwe ekupheleni komgca wemveliso, ukunciphisa ngakumbi umxholo womgubo kwi-bran. Iimveliso zethu zibonisa ubungakanani obuncinci, amandla aphezulu, ukusetyenziswa kwamandla aphantsi, ukusebenza komsebenzisi, inkqubo elula yokulungisa kunye nokusebenza okuzinzileyo.
Uthotho lweYYPYFP yomoya wentsimbi esimbaxa ngokuqina okuphezulu, ukusebenza okuzinzileyo nengxolo ephantsi, ukusebenza kulula ngokugcina ngokulula kunye nezinga lokusilela eliphantsi.